Pakupedzisira Apple haizoremedze "Sign in neApple" muEpic Games account | IPhone nhau
Epic Mitambo inotsanangura mune yayo yepamutemo Twitter account kuti Apple ichawedzera kunyoreswa uku nekusingaperi. Naizvozvi zvinoreva kuti vashandisi vanogona kuramba vachishandisa iyi sarudzo kunyoresa asi Epic inokurudzirawo shanduko yemazita kuvashandisi vavo uye ndeyekuti pane imwe nguva kutsigirwa kweApple kunogona kuvhara. Maawa mashoma mushure mekutaura kuti Apple yaizovhara sarudzo yekunyoresa ne "Sign in neApple" muEpic Games account zvinoita sekunge pane chibvumirano chidiki mupfungwa iyi.
Iyo tweet yakarongedzwa uye yakagadziridzwa neEpic inotevera:
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Apple yakambotaura kuti vaizogumisa "Sign In neApple" rutsigiro rweEpic Mitambo maakaunzi mushure meSept 11, 2020, asi nhasi zvapa kuwedzera kusingagumi. Tichiri kukurudzira iwe gadzirira maakaunzi ako izvozvi kuti "Saina Up neApple" kubviswa. https://t.co/hUDCKcajGo
- Epic Mitambo Chitoro (@EpicGames) September 10, 2020
Kubva kuna Apple pachayo havana kutaura nezvenyaya iyi uye ndosaka paine kumwe kusava nechokwadi mune izvi. Zvavanokurudzira kubva kuEpic Games ndezvekuti iwe uwane data rako mu yako webhusaiti y gadzirisa hunhu hwako kudzivirira matambudziko ekuwana Munguva pfupi iri kutevera, kuvhara kwesarudzo iyi kunosimbiswa.
Apple kudzima Fortnite "Sign in neApple" munaGunyana 11
Izvo hazviratidzike sekuti kunetsana kuri pakati pemakambani ese kune mugumo unofadza, saka zvinokurudzirwa kuve nezvose zvakasungirirwa zvakanaka kudzivirira matambudziko anogona kuitika kumativi ese. Ehe saizvozvo inyaya yeavo vanounza muswe uye hapana kana mumwe wavo angave achida kupa panguva ino kudaro mushandisi anofanira kudzivirira matambudziko erudzi chero rupi zvaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pakupedzisira Apple haizoremedze "Sign in neApple" muEpic Games account
Apple iri kuyedza Samsung yekupeta skrini kune ramangwana iPhones